Indlu yedolophu yaseBroughty Ferry - I-Airbnb
Indlu yedolophu yaseBroughty Ferry
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguVicky
Indlu yedolophu ezolileyo embindini weBroughty Ferry umgama wokuhamba ukuya kuzo zonke izinto zalapha ekhaya. Iindwendwe ziya kuba netownhouse yonke eqaqambileyo nephangaleleyo ekumanqanaba ama-3 anokufikelela kwigaraji encinci kunye neendawo zokupaka simahla esitratweni.
Le ndlu ineholo yokungena ekumgangatho ophantsi enegaraji yokungena kunye nekhabhathi enkulu yokugcina imithwalo. Ikhabhathi ixhotyiswe ngentsimbi kunye nebhodi yoku-ayina, isikrini sokumisa kunye ne-hoover.
Onke amagumbi okulala axhonywe eludongeni ii-smart TV's ngeNetflix
Umgangatho wesibini wendlu unekhitshi elikhulu eligcwele itafile yokutyela ehlala ezithandathu.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto zokupheka, umatshini wokuhlamba, i-oveni, imicrowave, iketile kunye netoaster.
Igumbi lokuhlala likweli nqanaba lineTV ehlakaniphile kwaye iFirestick iyafumaneka xa uyicela. Ukufikelela kwibalcony yangaphandle ukusuka kweli gumbi.
Igumbi leengubo kweli nqanaba.
Umgangatho wesithathu wendlu unamagumbi okulala ama-3 kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari ephezulu.
4.94 · Izimvo eziyi-163
Indlu isembindini ngoko ke ukuya ezivenkileni, kwiindawo zentselo, kwiikhefi, epakini naselwandle kuyafuneka, zininzi iindawo zokutyela eBroughty Ferry ukuze ungasokoli ngokutya okanye iziselo. ISt.Andrews yimizuzu engama-20 yokuqhuba. Imyuziyam ye-V & A kumbindi wesixeko saseDundee kukuhamba ngemizuzu eli-10 kuphela okanye ukuba uziva ukhuthele hamba imizuzu engama-50 ecaleni komlambo.
Ndiyafumaneka ngeselfowuni ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo kodwa andizukuphazamisa ukuhlala kwakho.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$632
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dundee City